Ama-TYBZ Synchronous Motors - ama-reducers, ama-worm reducers, amabhokisi wamagiya ezikelemu, amabhokisi wamagiya aseplanethi, ama-speed reducers, ama-variator, ama-helical gear, amagiya we-sprial bevel, amabhokisi wamagiya ezolimo, amagiya kagandaganda, amagiya eloli, u-gearbox webungu
Ama-Motors Wokuvumelanisa we-TYBZ
Ikhaya / motor / TYBZ Motors ezivumelanisiwe
Ukucacisa okuphezulu kokulawulwa kwejubane : iphutha ngaphakathi kwe-1/30000, elenza ngcono ubuchwepheshe bemikhiqizo yabasebenzisi;
Isistimu yokulawula elula nethembekile : Isebenzisa i-loop control evulekile, eyehlisa indawo enephutha nezindleko. Uhlelo lokulawula oluzenzakalelayo oluphelele oluqukethe i-inverter nekhompyutha lunokusebenza okungcono kunezinye izinhlobo zemoto yejubane eguquguqukayo yendabuko;
Isici samandla esisebenza kahle nesiphezulu, esisebenza kahle ekongeni amandla : kusebenza ngempumelelo okungu-5% kuye ku-12% kunemoto ye-asynchronous ye-HP efanayo. Njengoba imoto ingadingi i-current ethokozisayo, i-factor factor isondele ku-1;
Ukusebenza okubanzi : Ingasetshenziswa ezimeni ezahlukahlukene ezinzima. Ingasetshenziswa ngisho nasendaweni lapho ukugijima ngejubane eliphansi isikhathi eside noma ukuqala njalo kudingekile
Ama-Motors Wokuvumelanisa we-TYBZ Uzimele 45-71
56-1 I-TYBZ18-56-2 0.053-0.18 112-380 50-170 3000-10200 0.5 0.17 5
Ama-Motors Wokuvumelanisa we-TYBZ Uzimele 80
Isisekelo sokukhweza I-Flang No. Amapolisi Ubukhulu bokufaka Ubukhulu obubanzi